Global Voices teny Malagasy » Ndeha Hitafa Amin’i Janet Gunter – Mpandray Anjara Amin’ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy » Print
Ndeha Hitafa Amin'i Janet Gunter – Mpandray Anjara Amin'ny Global Voices
Voadika ny 14 Desambra 2012 1:16 GMT 1	 · Mpanoratra Juan Arellano Nandika avylavitra
Sokajy: Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka
Na rahoviana na rahoviana ireo mpikambana amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices nomandeha mivahiny any aminà firenena hafa, mazàna izy ireny no mahita hatrany fomba hihaonana amin'ny iray na maromaro amin'ny mpiara-mikatroka ‘GVers’. Andro vitsy lasa izay, Janet Gunter , mpandray anjara avy ao Lima, Però, sy ny tenako dia nifandamina fa hihaona hiresaka ny lohahevitra Pisco Sours , sy hiresaka mikasika ny firotsahany an-tsehatra miaraka amin'ny GV.
Janet Gunter (JG): Tamin'ny alàlan'i Sarita  [Mpamoaka Lahatsoratr'ireo Firenena Miteny Portioge ho an'ny GV], ary ny bilaoginay momba an'i Timor Atsinanana. Ny marina dia nihaona mivantana voalohany indrindra izahay tany Timor Atsinanana. Avy eo nihaona tamin'i Paula  [Mpamoaka Lahatsoratra Amin'ny Fiteny Marolafy ho an'ny GV] teto Londona. Ho ahy ny GV dia midika fihaonana sy fiaraha-miasa aminà olona mahafinarira. Ao amin'ny lisitry ny mailaka ho an'ny GV Portioge, tsapako ho toy ny manana namana ampolony izany aho manerana izao tontolo izao, manana fahalinana sy soatoavina mitovy. Tena zavatra faran'izay tsy fahita firy izany ho ahy.
JA: Mba lazalazao anay ny anjara andraikitrao amin'ny fandrakofana manokana nataon'ny GV mikasika ny “Eoropa anaty Krizy “.
JG: Miaraka aminà tsanganana 30 ao amin'ny kaontiko Tweetdeck ary tsy manana “fiainana manokana”! Raha lazaina amin'ny fomba matotra, tsinjoko fa betsaka amin'ny traikefako amin'ny maha-mpikatroka mafàna fo ahy – indrindra fa manodidina ny resaka tambajotra sy fifandraisana, no tena manampy tokoa ahy amin'ny fiainako eo amin'ny sehatry ny asa. Ao anatin'ny “tontolon'ny asa”, marobe ireo mamaly tokoa amin'ny fomba miabo ny fomba famaritako manokana ny tenako , izay tena marina tokoa amin'izay zavatra mandrisika ahy sy ny karazan'olona toa ahy. Mifameno mandrakariva ny izaho manokana sy ny izaho amin'ny tontolon'ny asa. Raha izay no mahalaza azy. (Io no tena nivoaka rehefa “nanao kisarisary” ireo zava-mahaliana ahy aho .)
Ankoatry ny zavatra rehetra ataony amin'izao fotoana, mahita fotoana ho anà tetikasa azy manokana i Janet : tetikasa fiaingàna vaovao . Miresaka momba io tetikasa io izy ao anatin'ity lahatsary manaraka ity :
Afaka mahita an'i Janet ety anaty aterineto ianao eto  ary koa ao amin'ny Twitter (@JanetGunter ).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/12/14/43062/
 Pisco Sours: http://en.wikipedia.org/wiki/Pisco_Sour
 fomba famaritako manokana ny tenako: http://www.rizominha.net/Storifyvitae
 “nanao kisarisary” ireo zava-mahaliana ahy aho: http://art-iculate.mindfulmaps.com/
 tetikasa fiaingàna vaovao: http://therestartproject.org/